Ekugcineni Ngibone Indlela Yokuba Umuntu Wangempela | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
1. Ukweduka kanye Nokuthola Indlela
18. Ikhona Indlela Yokunqoba Ukuzikhukhumeza
37. Ubuhlakani Obukhulu Kunabo Bonke Ukuphakamisa uNkulunkulu Nokubheka Kuyena
74. Uthando Lwensindiso KaNkulunkulu Ngesintu
78. Uthando LukaNkulunkulu Kuphela Olungolweqiniso
79. Zilungise Wena Ngaphambi Kokulungisa Abanye
85. Ekugcineni Ngibone Indlela Yokuba Umuntu Wangempela
UXiaoli Esifundazweni SaseHenan
Kusukela ngisemncane, isifiso sami sedumela njalo sasinamandla kakhulu, futhi lapho ngisebenzelana nabantu nganginaka kakhulu idumela lami, isikhundla sami emehlweni abanye abantu, kanye nendlela abangibheka ngayo. Ngakho njalo ngangivumela abanye abantu ukuba bavumelane nanoma yiziphi izimo, noma yimiphi imihlomulo, futhi ngangimane ngigcine ubunzima noma izinkinga enhliziyweni yami. Ngangingazikhulumi lezo zinto kunoma ubani, futhi lapho abanye abantu behlangabezana nobunzima njalo ngangicabanga ngezindlela zokubasiza. Ngakho emehlweni abazali bami, ngangiyintombazane ekahle; ngangijabula ngempela. Emehlweni omakhelwane nakubangane bami, nganginothando futhi ngiphana. Ngemva kokushada, futhi ngahlalisana kahle kakhulu nomndeni womyeni wami. Lapho udadewabo myeni wami nomfowabo myeni wami bethola abalingani futhi beshada, ngajabula kakhulu. Nganikela kokubili ngemali nangamandla, futhi ngahlanganyela umthwalo kanye nabazali bomyeni wami. Ngokushesha ngaba umakoti okahle kanye nodade omkhulu okahle. Eqinisweni, ngaleso sikhathi ngangikhathala nsuku zonke futhi ngangikhandleka kakhulu ngenxa yokuthi njalo ngangenza ngokucophelela ukuze ngilondoloze ubuhlobo bami nabanye abantu futhi nginakekela imizwa yawo wonke umuntu; ngangibheka indlela abenza ngayo bese ngikhuluma ngendlela efanele. Ngangesaba ukuphatha kabi omunye umuntu nokumshiya enombono omubi, futhi ngonakalise idumela lami. Ngemva kokuthola lawa “magama amahle,” enhliziyweni yami ngazizwa nginokuqhosha, nokuthi ukuzidela engangikwenzile kwakufanele. Ngazizwa ukuthi ngiphumelela kakhulu njengomuntu. Njalo ngangicabanga: Uma ngolunye usuku ngibhekana nanoma yibuphi ubunzima, abangane, umndeni, kanye nomakhelwane bami nakanjani bayongisiza nami ezinkingeni zami. Kodwa lapho nje ngisajabulela “engangikufeza” njengomuntu, kungalindelekile kwafika inhlekelele eyayingalindelekile—yaqeda ngokuphelele injabulo yami futhi yaguqula imibono yami.
NgoDisemba 4, 1991, umyeni wami wathola ingozi yemoto embi kakhulu. Ubende lwakhe lwahlakazeka, isibindi kanye nenso yakhe kwalimala, futhi kwaba nomonakalo omkhulu emathunjini. Wayopha ngendlela engalawuleki. Wahlinzwa izikhathi ezine ngenyanga eyodwa nje vo okwaba nokumpotshelwa igazi elingaphezu kwamamililitha ayi-2000. Noma kunjalo, impilo yakhe yayilokhu isengqupheni. Udokotela wathi uma babengaqhubeki nokumpompela igazi, amanxeba akhe ayengekwazi nhlobo ukuphola kalula. Ngaleso sikhathi wayesanda kuqeda ukwakha indlu futhi wayethenge nemoto, ngakho sasingene shi esikweletini. Empeleni kwakungekho indlela yokubhekana nezindleko zokwelapha ezinkulu kangako, futhi abazali bami babesebenzise yonke imali yabo ukuze umfowethu omncane akwazi kuya ekolishi. Babengenalutho nhlobo abangasisiza ngakho, ngakho ngangingenayo enye indlela ngaphandle kokuya ezihlotsheni nakubangane bami. Kodwa ngangingazange ngicabange ukuthi laba bantu ababevame ukungizungeza, ngokulandelana, babezothola izaba zokungangisizi, ukungigwema. Ngaphatheka kabi kakhulu. Kamuva, ngezwa ukuthi isihlobo esasikade sisisize kakhulu impela sathi komunye: “Ngeke sikwazi ukubaboleka imali. Alikho nhlobo ithemba lokuthi uzosinda, futhi uma efa, umkakhe uzomane ashade nomunye umuntu, khona-ke ubani oyosikhokhela? Futhi ngisho noma engafi, ngicabanga ukuthi uyokhubazeka ukuphila kwakhe konke, ngakho ingabe ukumboleka imali ngeke kube ukuyilahla?” Ngemva kokuzwa lawa mazwi angenamusa, angenaluzwela, ngamane ngakhala ngoba ngangazi ukuthi lokhu yinto eyayishiwo yibo bonke labo bantu ababengangiboleki imali. Kodwa into eyayingidumaza ngisho nakakhulu ukungabi namusa komndeni womyeni wami. Abazali bomyeni wami babenayo ngempela imali, kodwa basinikeza kuphela ama-yuan angama-500, futhi kamuva lapho sebesikhokhisa, babala izindleko zokuhamba kwabo, zokudla, kanye nezithelo zangesikhathi sokuzovakashela kwabo umyeni wami esibhedlela. Umyeni wami wayenabafowabo abancane ababili ababeme kahle ngokwezimali, futhi ngesikhathi befika bezomvakashela esibhedlela bamnikeza kuphela ama-yuan angama-500 bebobabili. Leyo mali encane esayinikezwa abakubo myeni wami kithi yayiyiconsi elisebhakedeni. Yayingeke isize ekuxazululeni ngempela izinkinga zethu. Ngisebuhlungwini nokuphelelwa yithemba, ngafaka isicelo sokubolekwa imali ebhange, kodwa ibhange lasenqaba isicelo sami. Ekugcineni, ngingenayo enye indlela ngathengisa imoto ngemali ephansi ukuze ngithole imali yokwelapha umyeni wami. Ngaphezu kwakho konke lokhu angingakwazanga ukuqongelela imali eyanele yokwelapha umyeni wami. Ngangingenakho ngempela engangingakwenza, futhi ngemva kwezinyanga ezintathu, umyeni wami washeshe wakhishwa esibhedlela lapho amanxeba akhe engakapholi kahle. Kodwa ngangingacabangi ukuthi lapho nje sifika ekhaya lethu, labo esasibakweleta imali base belapha ezithendeni zethu, begulukudela emnyango. Ngisho nodadewabo myeni wami omdala weza endlini yethu ezocela imali yakhe. Ngibhekene nalesi simo, ngaphatheka kabi kakhulu. Ngingedwa ngaya endaweni engamahlathi aphezulu entabeni ngiyokhala. Ngaleso sikhathi ngangisanda kuba neminyaka engama-24 futhi nginonyaka owodwa nje kuphela ngishade nomyeni wami. Abazali bomyeni wami abanonya babebeke wonke lo mthwalo phezu kwami, futhi akukho noyedwa umuntu owayefuna ukusisiza. Indlela engaphambili yayizoba yinde—ngangizobhekana kanjani nalolu hlobo losizi, nalolu hlobo lomthwalo? Lapho ngisemahlathini, ngacabanga futhi ngakhala, ngaphinde ngacabanga futhi ngakhala. Empeleni ngangingenaso isibindi sokuqhubeka, futhi ngabheka phezulu esibhakabhakeni: “Mazulu! Kungani ukuphila kwami kunzima kangaka? Empeleni angikwazi ukuqhubeka kulo mhlaba. O Mazulu, ngikunxusa ukuba uthathe ukuphila kwami!” Ukuhlupheka ngukuhlupheka, futhi ubunzima obungokoqobo kumele kubhekwane nabo ekugcineni, futhi ngangingenakho engangingakukhetha ngaphandle kokuvuka ngizithathe, ngiziqinise, futhi ngisekele umndeni wami. Ngafikelwa ukucindezeleka okunzima kokuphila, mina engangihlala njalo ngijabulile futhi ngiyingqabavu, ngehla ngenyuka nsuku zonke. Lapho umyeni wami engibona ngoniwe kakhulu, wakhala futhi wathi: “Kumele ushiye leli khaya; akufanele uhlupheke kangaka ngenxa yami!” Eqinisweni, ngake futhi ngaba nomcabango wokushiya, kodwa ngabona idumela lami libaluleke kakhulu kunegolide, ngakho empeleni ngangingeke ngishiye umyeni wami phansi kwalezo zimo. Izinsuku ezalandela zaba nzima ngisho nangokwengeziwe. Umyeni wami wayengakwazi ukwenza noma yimuphi umsebenzi wamandla, futhi ngaphezu kwalokho kwakunesomiso seminyaka emithathu cishe singekho isivuno iminyaka emithathu elandelanayo, ngakho ngangithwele izikweletu ezisindayo. Ngisho nokudla kwaba yinkinga. Lapho nje ngisacwile ekuphelelweni yithemba futhi ngingenalo ithemba lokuqhubeka, othile wangeluleka ukuba ngikholwe kuJesu. Ngemva kokukholwa Kuye, ngabona amazwi kaJesu aseBhayibhelini athi: Ngoba uNkulunkulu walithanda kangaka izwe, waze wanikela ngeNdodana yakhe ezelwe yodwa, ukuze lowo okholwa yiyo angabhubhi, kodwa abe nokuphila okuphakade. Ngoba uNkulunkulu akayithumelanga iNdodana ezweni ukuba yahlulele izwe; kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo (UJohane 3:16-17). Ngalezo zinsuku zokuhlupheka, lawo mazwi avela kuNkulunkulu angilethela induduzo enkulu. Ngafunda futhi eBhayibhelini ukuthi ngemva kokuba iNkosi uJesu esevusiwe futhi wasishiya, waya ukuyosilungiselela indawo, nokuthi uma isilungisiwe uyosihlangabeza. Kusukela ngaleso sikhathi, enhliziyweni yami ngabheka phambili osukwini azobuya ngalo uNkulunkulu, futhi ngacabanga: Lapho uNkulunkulu ebuya, ngeke kusadingeka ukuba ngizwe ukuhluphela kuleli zwe.
Ekupheleni kuka-1998, ngomusa kaNkulunkulu ngaba nenhlanhla yokuhlangana nodade owayekholwa kuNkulunkulu uSomandla. Lapho ngifunda kulokho udadewethu angitshela khona ngokuthi uNkulunkulu usebuyile kakade nokuthi wayenza umsebenzi omusha, angikwazanga ukubamba imizwa yami yenjabulo. Ngakhothama phambi kukaNkulunkulu futhi ngathandaza: “O Nkulunkulu Somandla, ithemba lami lokuthi uzobuya ekugcineni selifezekile. Ngihlupheke ngokwanele futhi ngaphila ngokwanele kuleli zwe losizi. Angikwazi ngisho nokuphila usuku olulodwa olwengeziwe. O Nkulunkulu, kungakhathaleki ukuthi yimuphi umsebenzi obuyele ukuzowenza, ngizimisele ukulandela Wena ngokuseduze.” Kamuva, ngokufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, ngaqonda amaqiniso amaningi engangingawaqondi ngaphambili. Ngabona uNkulunkulu eqondisa abantu ngendlela okufanele bakholwe ngayo kuNkulunkulu kanye nangendlela yokuphila ubuntu obufanele. Ngabona ukuthi onke amazwi kaNkulunkulu ayiqiniso futhi angamazwi abantu okufanele baphile ngawo, kanye nokuthi uNkulunkulu uyasihola ukuze sizikhulule esonweni, siphile impilo yobuntu obufanele, sihambe endleleni efanele ezimpilweni zethu. Ngaphezu kwalokho, ngabona uthando lwangempela lwabafowethu nodadewethu ngokusebenzelana kwami nabo, futhi ngathinteka kakhulu. Lokhu kwabonisa ngokwengeziwe ukuthi uNkulunkulu uSomandla uwukubuya kweNkosi uJesu, ukuthi unguNkulunkulu weqiniso obuyele ukuzosebenza nokuba asindise isintu. Lokho kwenzeka enkathini yokuphela kokuvuna kwekwindla. Lapho udade ophethe umsebenzi webandla ezwa ukuthi umyeni wami akakwazi ukusebenza inhlabathi, weza ezongibona futhi ngaleso sikhathi ngangithwele umthwalo wommbila emahlombe ami. Wawususa masinyane emahlombe ami futhi wangitshela ngokungagunci: “Ngizokwenza, phumula!” Ngosuku olulandelayo, wathola abanye abafowethu nodadewethu abambalwa ukuba beze bazongisiza ekuvuneni izilimo. Waze ngisho wangithengela izinkwana ezibilisiwe, ipasta kanye nemifino, futhi wanikeza ingane yami izinhlamvu zikabhekilanga noswidi. Ngemva kokwenza umsebenzi sabuyela endlini yami futhi abanye bangisiza ngokwenza ukudla, ukunakekela ingane yami, futhi abanye bangisiza ngokuwasha izimpahla. Abafowethu ababili banikeza ubufakaza kumyeni wami ngomsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina. Ntambama safunda ndawonye izwi likaNkulunkulu, sacula amaculo, futhi abafowethu nodadewethu balalela ngikhuluma ngobunzima bami. Abanye babo bakhala kanye nami, futhi abanye bangikhuthaza ngeqiniso. Phakathi kwabo, omunye udadewethu wathi kimi: “Ngaphandle kwalezi zinhlekelele, ubungeke ukholwe kuJesu Kristu, futhi ubungeke ukwazi ukwamukela umsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina. Ngaphezu kwalokho, ubungeke ukwazi ukubona uthando nensindiso Yakhe; lokhu akuyona into embi, kodwa yinto enhle.” Ngezwa ukuthi yonke into ababeyisho yayingavamile kakhulu futhi kwakuyilokho kanye engangikudinga. Kwangisondeza impela ngaphakathi. Lapho ngibona ukungisiza kwabo okuqotho, ngathinteka kakhulu impela. Babengebona abangane noma izihlobo, kodwa ngabazisa ngaphezu komndeni. Ukubhekana neminyaka yobunzima nezinsizi ekuphileni kwami kanye nokunganaki kwabanye abantu kwangenza ngadumala, kodwa uthando nokunakekelwa abafowethu nodadewethu kwangenza ngazizwa nginemfudumalo enkulu—ukumamatheka okwase kunesikhathi eside kwanyamalala kwabonakala ebusweni bami. Ngangingacabangi ukuthi ngingabona lobu buqotho engangibufisa iminyaka eminingi kubafowethu nodadewethu beBandla likaNkulunkulu uSomandla. Emaqinisweni abangikhuthaza ngawo nasendleleni ababephila ngayo, ngabona ukuthi uNkulunkulu uSomandla kuphela ongenza lolu hlobo lomsebenzi nongaguqula abantu. Ngakho ngokukhuthazwa uthando lukaNkulunkulu kanye nangokusizwa abafowethu nodadewethu, inhliziyo yami endikindiki yaqala ukuba nomuzwa omncane, futhi ngaphinde ngaba nethemba nesibindi sokuphila. Kamuva, ngabona ukuthi abafowethu nodadewethu babematasa futhi bezidela ngomsebenzi wevangeli likaNkulunkulu nokuthi akufanele ngihlale phansi, ngakho kungekudala nami futhi ngangenela umsebenzi wokushumayela ivangeli likaNkulunkulu wezinsuku zokugcina. Njengoba ukusebenzelana kwami nabafowethu nodadewethu kwakujula, ngabona ukuthi babengafani ngempela nabantu bezwe nokuthi ngaphakathi kwebandla, akudingeki ukhathazeke ngokuthi ubani uzokuhleka noma akubophele uzungu, noma kudingeke wesabe ukusho into ethile ngokunganaki futhi ukhube othile. Abafowethu nodadewethu njalo babethobekile futhi bexoxa lapho bendawonye, futhi babekhuluma noma yini esezinhliziyweni zabo, ngisho noma kwakusho ukudalula inkohlakalo ethile konke kwakusingathwa ngendlela efanele. Konke kwakwemukelwa kuNkulunkulu futhi kungekho muntu ozigaxa ezindabeni zomunye. Kwakungenandaba ukuthi ubani osho noma owenza into kabi; babengabambelani amagqubu futhi wonke umuntu wayebheka okungaphakathi enhliziyweni yakhe ukuze azazi yena futhi afunde noma yisiphi isifundo okudingeka asifunde. Noma yimuphi umfowethu noma udadewethu owayebhekana nobunzima, bonke babesebenza ndawonye ukuze bamsize, bahlanganyele ngenkuthalo iqiniso ukuze kuthi lapho bebhekana nalobo bunzima baqonde intando kaNkulunkulu futhi benze lokho okuyizimfuneko zikaNkulunkulu. Phakathi kwabafowethu nodadewethu kwakungekho ukwahlukana ngezigaba—bonke abantu babehlangana ndawonye njengabalinganayo. Izisebenzi zazifana nabafowethu nodadewethu abavamile; akekho owayekhethekile. KuNkulunkulu uSomandla ngabona ukukhanya, ngothola okuthile engingancika kukho, futhi enhliziyweni yami ngakwazi ukuzwa ukuthula namandla engangingazange ngibe nakho ngaphambili. Nsuku zonke ngaba nomdlandla nenjabulo engachazeki.
Kamuva, ngaphakanyiswa nguNkulunkulu ukuba ngibe umholi webandla kusukela ngo-Agasti 1998 kuye ekupheleni kuka-2005, futhi nakuba ngangichitha isikhathi isiningi kakhulu ebandleni, phakathi nalesi sikhathi ngajabulela kakhulu umusa nezibusiso ezivela kuNkulunkulu. Into eyayingakholeki kakhulu kimi ukuthi umyeni wami walulama ngokuphelele. Wayesebenza futhi ethola imali njengawo wonke umuntu, futhi lokho akuzange nje kuphela kusize ekunakekeleni izikweletu zekhaya lethu, kodwa sakwazi ukulondoloza okuthile. Izinsuku zethu zazedlula sinokuthula nokuzwana. Ngangithandaza futhi ngidumisa phambi kukaNkulunkulu nsuku zonke, ngibonga uNkulunkulu uSomandla ngokungisindisa, mina muntu wosizi, nokubusisa ikhaya lethu elake labhekana nobunzima obungaka. Ngabeka intando yami phambi kukaNkulunkulu futhi ngathi Kuye: Ngizimisele ukunika ukuphila kwami konke uNkulunkulu, ngikusebenzisele uNkulunkulu, ukuba ngikhokhele Yena ngothando Lwakhe olukhulu.
Ngokufunda ngokungayeki amazwi kaNkulunkulu, ngaqonda ukuthi umgomo kaNkulunkulu ekukhetheni abantu awukhona ukumane abavumele ukuba bajabulele izibusiso ezibonakalayo kanye nomusa Wakhe, kodwa okubaluleke kakhulu, ukwahlulela nokusola ukungalaleli okungaphakathi kubo, ukubavumela ukuba balahle isimo sabo sokukhohlakala, baphile njengomuntu wangempela. Njengoba nje uNkulunkulu uSomandla eshilo: “Namhlanje umuntu ukubona lokhu ngomusa, uthando nesihawu sikaNkulunkulu, akakwazi ukwazi ngokweqiniso ngokwakhe, angisaphathi ukwazi umongo womuntu. Kungokubhekana nakho kokubili ukucwengwa nokwahlulelwa nguNkulunkulu, kuphela ngesikhathi sokucwengwa lapho ungazi ubuthaka bakho, futhi uzazi ukuthi awazi lutho. Ngenxa yalokho-ke uthando lukaNkulunkulu ngomuntu lwakhelwe esisekelweni sokucwengwa nokwahlulelwa nguNkulunkulu. Uma uthokozela umusa kaNkulunkulu kuphela, unempilo yomndeni enokuthula noma ukubusiseka ngezinto eziphathwayo, lapho-ke awukamtholi uNkulunkulu, futhi inkolo yakho kuNkulunkulu ifadabele. UNkulunkulu usevele uwenzile umsebenzi wesiqephu esisodwa womusa enyameni, futhi usevele wathululela izibusiso zezinto eziphathekayo phezu komuntu—kodwa umuntu akakwazi ukupheleliswa ngomusa, uthando, nesihawu kuphela” (“Ukubhekana Nezilingo Ezibuhlungu Kuphela Okungakwenza Wazi Ubuhle BukaNkulunkulu” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Ukuze angisindise ngokuphelele, uNkulunkulu wangahlulela futhi wangisola, kulokho wangivumela ukuba ngibone ngokucace kakhulu uthando nensindiso Yakhe ngami.
Ngesikhathi ngisewumholi webandla, ngenxa yokukhathazeka kakhulu ngedumela nangesikhundla sami, njalo ngangilondoloza ubuhlobo bami nabanye emsebenzini wami ngokwesaba ukuthi abafowethu nodadewethu bazothi ngenze izinto ngenxa yesikhundla futhi bathi nginesandla esiqine kakhulu, bese bengibheka kabi. Ngakho ngisho nalapho ngibona abafowethu nodadewethu benza izinto eziphambene ngokucacile nezimiso zeqiniso futhi ezingazuzisi ibandla, ngangingakhulumi ngalezo zinto ukuze izinkinga zixazululwe ngesikhathi esifanele. Ngikhumbula ukuthi kwaba nesikhathi lapho udade owayenomthwalo wokwengamela umsebenzi wami ekuqaleni ehliswa esikhundleni, wase abelwa ukuba ezokwenza umsebenzi ebandleni engangilihola. Lapho ngihlola umsebenzi wakhe ngathola amaphutha nokusilela okuningi. Enhliziyweni yami ngangazi ukuthi kufanele sikhuthazane futhi kufanele ngimsize ukuze azazi bese elungisa lezi zindlela zokwenza izinto. Kodwa ngokushesha lapho ngicabanga ngokuthi wayengumphathi wami, ngakhathazeka ngokuthi uma ngiveza amaphutha nokungenzi ngokufanele umsebenzi wakhe, wayeyothi ngizithwele kakhulu, noma abe nombono ophambene ngami. Lapho ngicabanga ngakho konke lokho ngagcina ngokuzithulela, futhi mayelana nomsebenzi ayenomthwalo wawo, ngaqala ukuyeka izinto ukuba ziphume esandleni. Lokhu kwaze kwaba seqophelweni lokuba umsebenzi wobuvangeli ayenomthwalo wawo ungathuthuki izinyanga eziningana, abafowethu nodadewethu abaningi babenombono ophambene futhi bebuthakathaka, futhi ekugcineni waba buthakathaka kwaze kwaba seqophelweni lokuthi alahlekelwe ngokuphelele ngumsebenzi kaMoya oNgcwele wase emiswa ukuze azihlole. Ngesimo sokukhohlakala sami, udade owayengamele umsebenzi wami wangiqondisa futhi wangisiza izikhathi eziningi engikhuthaza ngeqiniso, kodwa ngenxa yokuqhubeka nokwehluleka ukuzazi mina, ngangingabuboni ubucayi benkinga. Angizange nhlobo ngikuthathe njengokubi kangako, futhi lapho isidlulile ngangilokhu ngiphila ngaleyo ndlela. Angizange ngiguquke ngempela. NgoDisemba ka-2005, ibandla lakhipha intshumayelo ethi: “Kuphela Ngokukhetha Abahola Abafuna Iqiniso Nabanobulungisa Okuvumelana Nentando KaNkulunkulu.” Lokhu kwadinga ukuba siqale ukuhlola kabusha abaholi bebandla ezindaweni zonke, futhi udade owengamele umsebenzi wami wangitshela: “Ngokusekelwe ekuhloleni izimiso, awufaneleki ukukhonza njengomholi webandla. Awunabo ubulungisa, futhi lapho kuvela okuthile njalo ukhetha ukugcina ubuhlobo bakho nabantu. Wena ‘ungunhliziyo enhle’ ongafuni ukucasula abantu. Lapho ngikubonisa amaphutha nezinkinga ezisemsebenzini wakho, uyazithethelela futhi ubeke izaba. Awukwamukeli lapho abanye bekweluleka futhi bethena izici zakho, futhi njalo ucabangela idumela nesikhundla sakho, ucabangela isithunzi sakho ezinhliziyweni zabanye abantu. Ekubhekeni konke, ungomunye wabantu okubhekiselwe kubo kule ntshumayelo—umuntu ‘ongunhliziyo enhle,’ omunye wabantu abakhohlisayo abangenabo ubulungisa okufanele akhululwe. Lokhu kungenxa yokuthi lapho uhlangabezana nenkinga njalo ucabangela okuhlomulisa wena; njalo ukhuluma futhi wenzele idumela kanye nesikhundla sakho. Awukhathazeki ngempela ngentando kaNkulunkulu, futhi awucabangi ngalokho okufanele ukwenze ukuze uhlomulise ibandla noma izimpilo zabafowenu nodadewenu. Uhola ibandla ngale ndlela futhi ulethe abafowenu nodadewenu phambi kwakho; okuwukumelana okubi kakhulu noNkulunkulu. Unikezwe isiqondiso izikhathi eziningi kulokhu okubonisile kulezi zimo, kodwa awuzange usithathe ngokungathi sina, noma uzimisele ukuguquka. Ngakho, ngokuvumelana nezimiso zakamuva zebandla zokusebenzisa abantu, kunqunywe ukuthi kufanele ukhululwe emisebenzini yakho ukuze uyozibheka wena. Lokhu akusho ukuthi ngeke ukwazi nhlobo ukuguquka. Ngethemba ukuthi lokhu uyokusingatha ngendlela efanele futhi uzibheke ngempela, ubone izici zokukhohlakala kwakho, bese uzimisela ukuguquka. Lokhu kuyozuzisa ukuphila kwakho siqu futhi kuphinde kuhlomulise umsebenzi webandla.” Njengoba udade wayekhuluma nami ubuso bami baguquka bonke baba bomvu. Ngezwa ngingenandawo engingacasha kuyo. Ngase ngifike kuleso sigaba futhi njalo ngangihlonishwa futhi ngidunyiswa ngabanye. Akekho owayeke wangidalula ngokuqondile ngaleyo ndlela. Ngaba nobuhlungu obukhulu kanye namahloni adlulele. Ngafuna ukungena emgodini bese nginyamalala. Ngokuvamile angizange ngifune iqiniso futhi angizange ngicubungule ngokujulile ukukhohlakala kwami, ngakho ngalolo suku lapho lowo dade ngokungalindelekile engitshela ukuthi imvelo yobuntu bami yayinokukhohlisa nokuthi ngiyasuswa esikhundleni ngenxa yaleso sizathu, angikwamukelanga ngempela lokho. Ngazizwa ngicindezeleke kakhulu—ngalahlekelwa ukuzibamba ngase ngiqala ukukhala. Ngazizwa nginombono ophambene futhi ngingenathemba. Ngikulokhu kusolwa okubuhlungu, ngabona amazwi kaNkulunkulu athi: “Abantu beza nezindlela zabo zokusebenzela izikhulu namakhosi endlini kaNkulunkulu, bese bezama ukuzisebenzisa, becabanga ngokuyize ukuthi zingasetshenziswa kalula nalapha. Abazange bacabange ukuthi uNkulunkulu akanaso isimo sewundlu kodwa esebhubesi. Ngakho-ke, labo abazihlanganisa noNkulunkulu okokuqala abakwazi ukukhuluma Naye, ngokuba inhliziyo kaNkulunkulu ayifani neyomuntu. … Uma uswele ulwazi lwangempela futhi unganikeziwe iqiniso, ukusebenza kwakho ngentshisekelo kungaletha phezu kwakho ukucasuka kanye nenzondo kaNkulunkulu. Manje kumele ukuba usuyaqonda ukuthi ukukholwa kuNkulunkulu akukhona nje ukufunda isayensi ngoNkulunkulu nenkolo.” “Uma ungozenzisayo nomuntu oyingcweti ‘kwezokuzijabulisa,’ ngizothi uwena ngempela ohlekisa ngoNkulunkulu. Uma amazwi akho egcwele izaba kanye nokuzihlangula okungenamsebenzi, ngithi uyilowo ongazimisele nhlobo ukwenza iqiniso” (“Izexwayiso Ezintathu” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Ngokungangabazeki isahlulelo esifanele esisemazwini kaNkulunkulu sangihlaba umxhwele. Ngangiyilo ngempela uhlobo lomuntu onenkohliso ozama ngokunengekayo ukungathembeki phambi kukaNkulunkulu, othembela kuyifilosofi yezwe likaSathane ezenzweni zami futhi ngimelene noNkulunkulu. Lapho ngicabanga ngesikhathi kusukela ngaba nomthwalo wemfanelo ngomsebenzi webandla, ngisho nakuba ngangiwenze ngokungayeki umsebenzi wami, ngangiwenzela ngokuphelele abafowethu nodadewethu ukuze bangibone ngiphakeme, ukuze nganelise ukuqhosha kwami futhi ngaphezu kwalokho ukuze ngilondoloze isikhundla sami. Lapho ibandla lihlola izinga lethu lokungena eqinisweni, ngezwa emazwini alowo dade ukuthi odabeni lokubona ukukhohlakala kwabo, izinga lokungena kulo labafowethu nodadewethu ebandleni lethu lalingelikha phezulu. Ngesikhathi ngigcwalisa iphephambuzo, ngaphendula ngobuqotho imibuzo ngineso elibheke ingxenye yolwazi lwami ukuze lo dade ezongihlonipha, kanye nokumbonisa ukuthi nginekhono lokuhola abafowethu nodadewethu ukuba bazazi bona. Esikhathini esedlule nganginikeze isiqondiso kudade esasisekelwe entandweni yami, okwaphumela enkingeni enkulu emsebenzini wakhe. Lokhu kwagcina kubangele ukulahlekelwa okukhulu kwebandla. Lapho umholi webandla eletha lokhu ekunakeni kwami, ngakholwa ukuthi wenziwa ukuthi akayazi yonke indaba, ngakho ngazenza ongazi futhi ngangawusho umthwalo wami wemfanelo. Lolu hlobo lwento eyenzeka kimi kwakungesona nje isehlakalo esake senzeka, kodwa yindlela yokwenzeka njalo kwezinto. Ngacabanga ngazo zonke izikhathi okwakwenzeke ngazo lezi zehlakalo, futhi udadewethu wayekhuluma njalo ngenkuthalo nami ngaso ukuze angisize ngiqonde iqiniso futhi ngizazi mina, kodwa ukuze ngivikele idumela nesikhundla sami ngangibeka izaba ukuze ngizithethelele. Ngangixoxa ngokuhle nokubi, futhi ngingamukeli usizo lwesiqondiso sikadadewethu. Lokhu kwaba nomthelela omubi kakhulu emsebenzini webandla futhi akuzange kulethele abafowethu nodadewethu imfundiso noma ukondleka kwangempela. Ukuthi namuhla ngangikhululwa emisebenzini yami futhi kimi kwabonakalisa ukulunga okuphelele kukaNkulunkulu. Lokhu kungenxa yokuthi uNkulunkulu ungcwele futhi akabavumeli abantu ukuba balethe izindlela zabo zezwe zokuzenzisa bazozisebenzisa endlini Yakhe. Ikakhulu akavumeli bonke labo abanesimo sobusathane ukuba bahole ibandla. Ngokukhanyiselwa nangokuqondiswa okuvela kuNkulunkulu, ngacabanga ngamazwi Akhe: “Uma nilungile futhi nithembekile ikakhulukazi ezihlotsheni zenu, kubangani benu, emakhosikzini (noma kubayeni), emadodaneni kanye namadodakazi, nakubazali, futhi ningasizakali ngabanye, kepha ningakwazi ukuhambisana futhi nibe nokuthula noKristu, ngisho noma nithumela konke okwenu ukuyolekelela omakhelwane benu noma ninakekele oyihlo, onyoko, kanye nemizi yenu, Mina ngisathi nikhohlakele, ningamaqili futhi. Ningacabangi ukuthi ningabahambisana noKristu uma nihambisana nomuntu noma nenza izenzo ezinhle. Niyakholwa yini ukuthi ukulunga kwenu kungantshontsha isibusiso saseZulwini? Nicabanga ukuthi izenzo zenu ezinhle zithatha indawo yokulalela kwenu?” (“Labo Abangahambisani NoKristu Impela Bangabaphikisana NoNkulunkulu” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Amazwi kaNkulunkulu adalula ubuntu bami njengokungathi busikwe bavulwa ngommese. Ababizwa ngokuthi “abantu abalungile” ezweni ababona abantu abalungile emehlweni kaNkulunkulu. Ngaphandle ezweni abantu bangabonisa nje imikhuba emihle, kodwa lapho usendlini kaNkulunkulu uma ungeke wenze izinto ngendlela efanele, futhi ungeke ube umuntu othembekile, emehlweni kaNkulunkulu lona umuntu oyingozi nokhohlisayo. Ngicabanga ngokuthi kusukela ngesikhathi ngisemncane kuze kube yileso sikhathi njalo ngangisebenza kanzima ukuze ngakhe idumela elihle, ukusiza nokunakekela wonke umuntu, ukubheka njalo indlela abanye abenza ngayo bese ngikhuluma futhi ngenze ngendlela efanele. Ngangizimisele ukwamukela ukuhlupheka okukhulu kanye nokoniwa ukuze ngilondoloze leli dumela. Lezi zindlela zokuthonya abantu zisebenza ngempela ezweni futhi ngathola ukudunyiswa abantu bezwe; lokhu kungenxa yokuthi babengakholwa kuNkulunkulu futhi bangenalo iqiniso. Ababuboni ubuntu babantu futhi abazenzi izinhloso nezisusa zabantu ezenzweni zabo. Bamane behlukanise kuphela phakathi kokuhle nokubi ngokusekelwe ekuziphatheni kwangaphandle kwabanye. Akunandaba ukuthi kade kuwubani, kuphela uma bezenzisa kahle futhi benza izinto ezinhle ngaphandle, bangathonya abantu futhi babe nedumela elihle. Kodwa lapho ngiletha lezi zinto zezwe endlini kaNkulunkulu futhi ngisebenzisa lawa mafilosofi asezweni emsebenzini wami ebandleni, lokhu yikho kanye okwenyanyekayo kuNkulunkulu. Kubonisa ukungabi nobulungisa, nokuba nenkohlakalo eyonakele. UNkulunkulu unguNkulunkulu ongcwele nomuhle, uthando nomzamo Wakhe ngabantu okweqiniso futhi akulona ize. Ukuze asindise isintu, uzimisele ukunikela ngakho konke ngaphandle kokufuna utho. Lapho ekhuluma futhi enza akanakho ukonakala; konke kuyisambulo semvelo yesimo Sakhe. Ngakho, uNkulunkulu ukhetha abantu abanomfuziselo wangempela wabo, abakhuluma nabenza ngobuqotho, abangenakho ukuzenzisa. Kodwa izinhloso zami ekwenzeni izinto zazingabonisi ukucabangela okuqotho intando kaNkulunkulu nokwanelisa Yena, kodwa ukwenza abafowethu nodadewethu babheke mina futhi baqaphele mina. Kwakuwukuba ngizenzele igama nokuba ngiqashelwe, ukuba nganelise izifiso zami. Ngangiyilokho uNkulunkulu akwembule emazwini Akhe njengokuba umuntu onokukhohlisa noyingozi. Ngenxa yokuthi umsebenzi uNkulunkulu awuphethayo ezinsukwini zokugcina yilowo wokwahlulela nokusola, kanye nokuguqula izimo zabantu, kufanele adalule futhi ahlambulule abantu ngezimo zezinhlobo ezahlukahlukene. Futhi mina, njengomholi webandla, ngangingayicabangeli intando kaNkulunkulu; lapho abafowethu nodadewethu beveza ukukhohlakala ngangingakwazi ukubasiza babone lokho kubo noma babone ngokucacile ingqikithi yenkinga ukuze baphenduke futhi baguquke ngempela. Kuphela ngangivikela isithunzi sami ezingqondweni zabanye abantu; ngangesaba ukucasula abanye ngakho ngazithulela futhi njalo ngezama ukuba “unhliziyo enhle.” Lokhu kwakusho ukuthi izimo zokukhohlakala zabafowethu nodadewethu zazingeke zixazululwe ngesikhathi esifanele—ingabe lokhu kwakungabaholeli engozini? Ingabe ngangingenayo inhliziyo embi kakhulu? Ngibonga ukukhanyiselwa nokuholwa uNkulunkulu, ekugcineni ngabona ukuthi isimo sengqondo “sokufuna abanye bangihloniphe, nganelise ukuqhosha kwami” kuyinto eyingozi, engumdlavuza otshalwe kimi ngokujulile uSathane! Kodwa njalo ngangifuna lokhu njengokungathi kuyizinto ezinhle, ngikubona njengesisekelo sendlela yokuziphatha kwami futhi ngize ngikusebenzise endlini kaNkulunkulu, ngikhohlise uNkulunkulu, ngikhohlise abafowethu nodadewethu, ngithathe umsebenzi webandla njengomdlalo. Empeleni ngangidukile futhi ngingowokudatshukelwa. Ngangizikhohlisa ngicabanga ukuthi ngiyaphumelela ekubeni umuntu omuhle, kodwa ngalolo suku lokwahlulela okwambulwa ezwini likaNkulunkulu, ekugcineni ngabona ukuthi yonke into engangiyiphila yayiyisimo sobudemoni bukaSathane. Kwakungesikho nhlobo okufanele ngikuphile ngobuntu obufanele. Kwaba ukwahlulela nokusola kwamazwi kaNkulunkulu okwangenza ekugcineni ngabona ngokucacile indlela uSathane akhohlakalisa ngayo isintu. Kwakunesikhathi eside kutshalwe ngokujulile emphefumlweni wami izimbewu zobuthi bokuzakhela igama, ukulondoloza idumela, umbono ohloselwe umuntu kodwa hhayi idumela lakhe nokumdalula kodwa hhayi amaphutha akhe. Lokhu kwakuwukungifaka ubuthi, ukudlala ngami, ukungenza ngingabi qotho futhi ngikhohlise ngokwengeziwe, ukuze ngibe umkhohlisi wangempela.
Ngemva kokuba sengilibonile iqiniso lokuthi ngangikhohlakaliswe uSathane, ngokushesha ngathandaza kuNkulunkulu ukuze ngifune iqiniso elifanele lokuxazulula ukukhohlakala kwami. Ngase, ngibona lawa mazwi avela kuNkulunkulu: “Embusweni Wami bonke abantu bangabantu abethembekile abangesibona abazenzisi noma abakhohlisayo. Emhlabeni, akunjalo ukuthi bonke abethembekile abemukelwa? Mina anginjalo. Kulungile lapho umuntu othembekile eza Kimi; ngiyalwazisa lolo hlobo lomuntu, futhi ngiyaludinga. Lokhu kungulunga Kwami” (“Izwi Lamashumi Amathathu Nantathu ” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). “Ukuthi uNkulunkulu ucela abantu ukuba bethembeke kufakazela ukuthi ubenyanya ngempela labo abanokukhohlisa. UNkulunkulu akabathandi abantu abakhohlisayo, okusho ukuthi akazithandi izenzo, izimo ngisho nezizathu zabo zokwenza; okungukuthi, uNkulunkulu akathandi indlela abenza ngayo izinto, ngakho, uma kufanele sithokozise uNkulunkulu, kufanele siqale siguqule izenzo nendlela yethu yokuphila. Phambilini, sasethembela emangeni, ekuzenziseni, nasenkohlisweni ukuze siphile phakathi kwabantu. Lokhu kwakungumnotho wethu, nesisekelo sobukhona, impilo, nesisekelo esasiphila ngaso. Futhi konke kwakwenyanywa nguNkulunkulu. … Ngakho-ke, namuhla, sekunqunyiwe: Uma singathembekile, futhi uma, ezimpilweni zethu, ukwenza kwethu kungaqondiswa ekwethembekeni futhi singembuli usimo sethu sangempela, khona-ke ngeke sibe nathuba lokuzuza umsebenzi kaNkulunkulu noma ukuzuza ukunconywa uNkulunkulu” (“Ukuze wethembeke, Kufanele Uzivule Kwabanye” kwethi Izinkulumo ZikaKristu Ezilotshiwe). Isiqondiso esicacile esisemazwini kaNkulunkulu sanginikeza indinganiso yokuba umuntu kanye nesiqondiso ekuphileni kwami—ukuba umuntu oqotho. Umuntu oqotho ubonisa umfuziselo wangempela wakhe futhi enze lokho akushoyo. Akanakho ukuzenzisa, akanawo amaqhinga omuntu siqu, akasebenzeli idumela noma umhlomulo wakhe siqu. Kuzo zonke izinto ufuna kuphela ukwanelisa uNkulunkulu, futhi azuzise izimpilo zabantu ngamazwi nangezenzo zakhe. Ngakho umuntu oqotho ngempela ongumuntu wangempela, ongumuntu owenza uNkulunkulu ajabule. Abantu abaqotho kuphela abangathola insindiso Yakhe futhi bangene embusweni kaNkulunkulu. Ngeke ngisathembela emangeni nasekuzenziseni ekuphileni kwami. Kufanele ngiguqule izindlela zami zokuphila, ngilungise izinhloso zami ngezenzo zami, futhi ngingaphileli idumela noma isikhundla. Kuzo zonke izinto kufanele ngigxile ekubeni umuntu wangempela, ngenze ngokuvumelana nezimfuneko zikaNkulunkulu.
Ngisho nakuba ngizimisele ukufuna ukuba umuntu uqotho, njengoba ngonakaliswe ngokujulile uSathane, ukukwenza kuselokhu kunzima kakhulu; ikakhulu ngesikhathi kuphathelene nedumela noma isikhundla sami, ngimane ngiqambe amanga futhi ngikhohlise abanye. Ngikhumbula lapho ngishumayela ivangeli futhi ngabona ukuthi abafowethu nodadewethu babezinikela ngempela ekushumayeleni ivangeli, futhi beletha abantu abaningi kuNkulunkulu, kodwa imiphumela yami ayizange ibe mihle. Ngazizwa nginamahloni, futhi ngakhathazeka ngokuthi abanye abantu bazongibukela phansi ngenxa yalokho. Phakathi nalezo zinsuku ezimbalwa ngangisanda kunikeza ubufakazi elungwini elisha ngomsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina, futhi waletha abangane ababili abengeziwe endlini yakhe ukuze futhi ngikhulume nabo. Kodwa ngenxa yokuthi kwavela ezinye izinto ngalolo suku, angizange ngiphumelele. Kusihlwa udade wangibuza ukuthi bangaki abantu engangibaguqulile, futhi ngaphandle kokucabanga ngamtshela: “Abantu abathathu.” Ngemva kokuba esehambile, ngaqala ukuzisola: Empeleni ngangiguqule umuntu oyedwa, ngakho kungani ngathi abathathu? Ingabe kwakungekhona ukuthi kungenxa yokuqhosha kwami, idumela lami? Ngaphambili, lapho ngangingagxilile ekubeni umuntu oqotho, ngakhuluma amanga amaningi ngaphandle kokuwaqaphela, kodwa ngesikhathi ngiqala ukugxila kukho ngabona ukuthi ngiqambe amanga kakhulu nokuthi lawa manga amane aziphumela emlonyeni wami. Kubonakala sengathi ngangizibulala mina ngalawa manga. Kwadingeka ngithole ukusolwa okukhulu ngalokhu, futhi ngakhathazeka ngokuthi ngaba lukhuni kakhulu ukubhekana nakho. Ngazibuza: Ingabe kuzokubulala ukukhuluma iqiniso? Kungani ungamane nje ukhumbule izinto? Ngadumala ngenxa yokuthi angizange ngikwazi ukungena ngempela eqinisweni lokuba umuntu oqotho. Ngazizwa ngiwumuntu obe yisehluleki sangempela futhi ngaze ngakholwa ukuthi uNkulunkulu akafuni ukuphinde, angibone, mina mkhohlisi. Kwakunzima kakhulu kimi ukukhuluma iqiniso, futhi ngaba nezimo eziningi kakhulu zokukhohlakala, ngangingakwazi kanjani ukuguquka? Kwahlaluka ukuthi ubuntu bami babunjengobukadeveli futhi ngangingeke ngisindiswe uNkulunkulu. Ngokuhamba kwesikhathi uzongisusa. Lapho imicabango yami iya lapho, ngalahlekelwa yikho konke ukuzethemba futhi ngaqala ukudikibala.
Kwathi nje lapho ngiqala ukucwila embonweni ophambene nowokudebesela, amazwi avela eculweni lezwi likaNkulunkulu azwakala enhliziyweni yami: “Kufanele sibe nesinqumo esisodwa: Kungakhathaleki ukuthi sinzima kangakanani isimo noma yibuphi ubunzima esibhekene nabo, kungakhathaleki ukuthi sibuthakathaka futhi sinombono ophambene kangakanani, asikwazi ukulahlekelwa yithemba lethu ekuguquleni isimo sethu, noma silahlekelwe yithemba emazwini kaNkulunkulu. UNkulunkulu unikeze isintu isethembiso, futhi ufuna ukuthi umuntu abe nesinqumo, nokuthi abe nokubekezela ukuze amukele. UNkulunkulu akawathandi amagwala, uNkulunkulu uthanda abantu abanesinqumo. Noma ngabe ukhombise ukukhohlakala okuningi, ngisho noma uhambe ngezindlela eziningi ezijikajikayo, noma wenze amacala amaningi endleleni; uma umelene noNkulunkulu, noma uma abanye benu behlambalaze uNkulunkulu ezinhliziyweni zenu; noma uma nibe nokuvungazela, noma nibe nokuxabana, uNkulunkulu ubheka kuphela ukuze abone ukuthi niyoguquka yini. Njengoba nje umama eqonda ingane yakhe, uNkulunkulu uqonda wonke umuntu ngamunye. Uqonda bonke ubunzima, ubuthakathaka nezimfuneko abantu abanazo. Ngaphezu kwalokho, uqonda ubunzima, ubuthakathaka nokwehluleka umuntu azohlangana nakho kuyo yonke inqubo yokuguquka kwesimo sakhe. UNkulunkulu ukuqonda kahle kakhulu lokhu, okungakho ngithe UNkulunkulu uthungatha inhliziyo futhi uhlola ingqondo. Kungakhatheleki ubuthakathaka bakho, uma nje ungashiyi igama likaNkulunkulu, ungashiyi uNkulunkulu futhi ungashiyi indlela Yakhe, khona-ke uyohlala unethuba lokuguqula isimo sakho. Uma sinamathuba okuguqula isimo sethu, khona-ke sinethemba lokuqhubekela phambili. Uma sethemba ukuqhubekela phambili, khona-ke sinethemba lokusindiswa nguNkulunkulu” (“UNkulunkulu Uthanda Abantu Abanesinqumo” kwethi Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha). Lawa mazwi avela kuNkulunkulu angithinta ngempela; kuwo ngabona amathemba kaNkulunkulu futhi ngaqonda ukuthi ukuguquka kwesimo akuyona into elula. Ukuba umuntu oqotho akuyona into eyenzeka ngobusuku obubodwa, kodwa kudinga mina ngifune iqiniso ngokungayeki futhi ngibe nesinqumo esingenakunyakaziswa. Ngesikhathi esifanayo ngaphinde ngabona ukuthi uma ngethembela kuphela entandweni yami ukuze ngizilawule futhi ngizithibe ekubeni ngingakhulumi amanga, ngeke ngikwazi ukuhlangabezana nendinganiso yokuba umuntu oqotho. Kwadingeka ngiqhubeke nokubona imvelo yami yobusathane emazwini kaNkulunkulu, futhi kuzo zonke izinto ngigxile ekuhloleni izinhloso zami, ikakhulu ngesikhathi ngikhuluma noma ngenza ngenxa yedumela noma isikhundla. Khona-ke, ngokukwenza kancane kancane lokhu nangokuphikelela ngikwenza ngakwazi ukuguquka. Ngibonga ukukhanyiselwa nokuholwa uNkulunkulu ukuthi ngaba nendlela yokukwenza lokho, futhi nginokuqiniseka nokuzimisela ukuqhubeka ngifuna ukuba umuntu oqotho.
Kungakabiphi, ukuze angiguqule futhi angihlambulule, uNkulunkulu waphinda futhi walungiselela isimo ukuze angivivinye, ukuze angenze ngiphelele. Umholi webandla lethu wayengumngane wami omkhulu, futhi sasinobuhlobo obusondelene kakhulu. Kwaba nesikhathi lapho anginika khona usizo olumangalisayo ekuphileni kwami, kodwa ngaleso sikhathi isimo sakhe saba nobunzima obukhulu, waze wagcina enze umonakalo emsebenzini webandla. Abafowethu nodadewethu bahlangana naye bemkhuthaza ngalokhu izikhathi eziningi, kodwa akuzange kube khona ukuguquka. Ngemva kokuzwa ngalokho ngafuna ukuyomkhuthaza, kodwa ngiqhutshwa yimvelo yami, ngangesaba ukumcasula futhi ngazithethelela: Manje asisenzi ndawonye imisebenzi yethu ngakho akudingeki ngikunake lokhu. Uma ngempela engafaneleki ukuba umholi webandla, abafowethu nodadewethu bazosiza ekudaluleni lokho. Lapho ngiba nalowo mcabango, amazwi okwahlulela kaNkulunkulu angifikela masinyane: “Sekukaningi Ngeluleka abafowethu nodadewethu abanaMi ukuthi kumele bakholelwe kuNkulunkulu ngokusuka ezinhliziyweni zabo bangavikeli nezintshisekelo zabo, ukuze bacabangele intando yaKhe” (“Indlela… (5)” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). “Yiba nombono ocacile ngakho konke uNkulunkulu akwenzayo, bona izinto ngokuhambisana nezwi likaNkulunkulu nezinto ngokuma ngasohlangothini lukaNkulunkulu. Ngale ndlela izinhloso zakho ziyoba ezilungile. Ngakho, ukwakha ubuhlobo obuhle noNkulunkulu kuyinto ehamba phambili kuwo wonke umuntu okholelwa kuNkulunkulu; wonke umuntu kufanele akubheke njengomsebenzi obaluleke kakhulu nanjengesehlakalo esikhulu kakhulu. Yonke into oyenzayo kufanele ikale ukuthi unabo yini noma cha ubuhlobo obujwayelekile noNkulunkulu. Uma ubuhlobo bakho noNkulunkulu bujwayelekile nezinhloso zakho zilungile, kwenze. Ukuze uvikele ubuhlobo obujwayelekile noNkulunkulu, akufanele wesabe ukulahlekelwa izinto ozithandayo, akufanele uvumele uSathane alwe nawe, akufanele uvumele uSathane abe nentuba kuwe, futhi akufanele uvumele uSathane akwenze inhlekisa” (“Bunjani Ubuhlobo Bakho NoNkulunkulu” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Ukwahlulela okusemazwini kaNkulunkulu kwangenza ngabona ukuthi uma ngiqhubeka ngivikela imihlomulo yenyama, ngangiyobe ngihambisana noSathane, futhi ngangiyodumaza futhi ngicasule ngokuphelele uNkulunkulu. UNkulunkulu wayekhokhe inani elingenakulinganiswa ngenxa yami, futhi ngomzuzu wokugcina njalo ngangizomzwisa ubuhlungu ngenxa yenyama. Ingabe mina ngangiwumuntu? Kungani ngangingakhathazeki ngentando Yakhe? UNkulunkulu wayenginike umusa ongenasiphelo kanye nezibusiso ezingenakubalwa, ngakho kungani kwakungafanele ngimkhokhele? Ukwenza umsebenzi webandla kungenye yezinto eziyisisekelo kakhulu zomsebenzi wami njengomuntu okholwa kuNkulunkulu, kanti ukuba nobuhlobo obufanele Naye kubaluleke kakhulu kimi njengekholwa. Kudingeka nganelise intando Yakhe; ngangingeke ngiqhubeke nokuphilela idumela nesikhundla sami, bese ngilimaza inhliziyo Yakhe. Ngakho, nganquma ukuhamba ngiyomkhuthaza, futhi kulokho kumkhuthaza ngathola ukuthi wayesesimweni esibi kakhulu, nokuthi wayengenayo nhlobo inhliziyo yokufuna iqiniso. Ngangazi ukuthi empeleni kufanele akhishwe esikhundleni nokuthi kwakufanele ngazise ibandla ngesimo sakhe, kodwa ngokushesha nje lapho ngicabanga ngendlela ayengisize ngayo, ngaba nokungabaza futhi ngangingazimisele ukumcasula. Lokhu kwakubuhlungu ngempela kimi. Uma ngingasivezi isimo sakhe, ngangingeke ngikwazi ukubhekana noNkulunkulu. Uma ngiveza isimo sakhe, inhliziyo yami yayingeke ikwazi ukumelana nakho. Ngakuletha lokhu kuNkulunkulu futhi ngathandaza izikhathi eziningi, futhi wangikhanyisela ukuthi kufanele nginikezele inhliziyo yami kuNkulunkulu, futhi ngingakhohlisi labo abangaphezu kwami noma ngidukise labo abangaphansi kwami. Ngaphansi kokuholwa uNkulunkulu, ekugcineni ngaqonda ukuthi ngeke ngingawunaki umsebenzi webandla ukuze ngilondoloze ubuhlobo bami nabanye, nokuthi ukubika udaba lwakhe ebandleni empeleni kwakuzomsiza, futhi kwakuzoba usizo kuye ekubeni azihlole. Njengangaphambili, ukube angizange ngehliswe esikhundleni futhi ngahlolwa ngokucophelela yilowo dade, eqinisweni ngangingeke ngizazi, futhi ngangingeke ngikwazi ukungena ekuphileni kwami. Ngakho ngaqunga isibindi ngase ngibhala isimo ngendlela engangisiqonda ngayo ukuze ngiyinikeze umphathi wami ebandleni. Wehliswa ngokushesha esikhundleni sakhe. Ngemva kokuba sengenze lokho, ngazizwa ngijabule kakhulu ngokwenza njengomuntu oqotho ngaleso sikhathi. Kungalindelekile inhliziyo yami yavuleka futhi ngezwa injabulo yokwenza iqiniso nokwanelisa inhliziyo kaNkulunkulu. Kusukela lapho, ukuzethemba kwami ekwenzeni njengomuntu oqotho kwakhula. Esikhathini esedlule njalo ngangesaba ukuthi uma abafowethu nodadewethu bazi ngezinto ezingenhle ekuphileni kwami, ngeke besangihlonipha. Njalo ngangifihla izinto, kodwa manje angisezwa ukuthi kwakunesidingo sokuba ngifihle lezo zinto, ngakho emhlanganweni ngabatshela ngokungafihli abafowethu nodadewethu ukuthi kungani ngehliswa esikhundleni, ukuthi zingaki izinto ezimbi kakhulu engangizenzile eziphambana neqiniso nokuthi kungani ngangikhohlisa kuNkulunkulu kanye nakubafowethu nodadewethu. Lapho ngisho konke lokhu ngangiqhaqhazela kanti ubuso bami babushisa, kodwa into engangingazange ngiyicabange ukuthi ngemva kokuba abafowethu nodadewethu bengizwe ngisho lokhu, akukho noyedwa owangizonda noma wangangihlonipha. Omunye udade wathi kimi: “Esikhathini esedlule ngangingafuni ukwenza okuningi nawe ngenxa yokuthi ngangizizwa sengathi ngeke ngisondelane nawe. Umuzwa engawuthola kuwe owokuthi awukaze ube nanoma yikuphi ukukhohlakala, ngakho ngazigcina ngikude nawe futhi ngangingafuni ukuxoxa nawe. Lapho wehlisa esikhundleni lo dade, ngacabanga ukuthi ngenxa yokuthi unobuhlobo obuhle naye, ngeke ume ohlangothini lweqiniso, kodwa empeleni uyoba ngasohlangothini lwakhe futhi umkhulumele. Ngangingacabangi ukuthi uzomdalula futhi ukhulume ngaye. Umsebenzi kaNkulunkulu ungaguqula abantu, futhi ngawe ngiyabona ukuthi ngempela uNkulunkulu unguMsindisi wesintu!” Ngazizwa nginamahloni futhi ngithintekile ngamazwi kadadewethu. Esikhathini esedlule, njalo ngangicabanga ukuthi angizange ngembule uhlangothi lwami olungeluhle kubafowethu nodadewethu, nokuthi ngingalondoloza idumela lami elihle. Kodwa empeleni, ngaphansi kokuholwa uNkulunkulu babekwazi kakade ukwehlukanisa okuhle kokubi, futhi lapho ngizenzisa kakhulu, kwaba yilapho bekwenyanya futhi becasulwa yikho ngokwengeziwe. Lapho ngikhuluma ngakho kakhulu, angizange kuphela ngikwazi ukuthola ukukhanyiseleka nokukhanyiselwa uNkulunkulu, kodwa futhi ngaba nokusondelana ngempela nabafowethu nodadewethu. Ngabona ngempela ukuthi umuntu oqotho kuphela ongumuntu wangempela, futhi ongumuntu uNkulunkulu kanye nabantu abamthandayo. Inhliziyo yami yazizwa ikhululeke ngendlela eyayingazange ibe yiyo ngaphambili. Ngenxa yokuthi ngangizimisele ukuba umuntu oqotho, lapho umsebenzi obalulekile uvela ebandleni, umholi webandla wayengabela ukuba ngiyowunakekela. Ngalolu hlobo lomsebenzi, angizange nje kuphela ngenze izinto ezazihlomulisa ibandla kanye nabafowethu nodadewethu, kodwa ngalokho futhi ngaqonda iqiniso futhi ngafunda izifundo ezithile. Ngazizwa ngikhululekile futhi ngakujabulela lokho; ngazizwa ngikhululeke kakhulu, futhi ukuphila ngaleyo ndlela kwakubaluleke kakhulu.
Kodwa ekuphileni kwami okungokoqobo ngangingaxhumani nabafowethu nodadewethu kuphela. Kwakusadingeka ukuba ngibhekane nomndeni, izihlobo, kanye nabangane bami abangakholwa kuNkulunkulu, futhi lokhu nakho kwaphinde kwangilethela ubunzima. Ngangingakwazi ukuba umuntu oqotho phakathi kwabo, ikakhulu ngokushesha lapho ngicabanga ngesikhathi engangisanda kuqala ngaso ukwamukela umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, akekho kwengangifunda nabo, izihlobo noma abangane owayengiqonda. Babengigwema, futhi nami ngangibagwema ngenxa yokuthi ngangesaba ukuthi bazohlekisa ngami. Lapho ngihlangana nabo, ngangingakhulumi ngokusuka enhliziyweni, kodwa ngangithola izaba noma ngikhulume amanga kubo. Ngangizigcina ngikude nabo, futhi ngikholwa ukuthi umuntu oqotho akufanele ezwane nalabo abangakholwa kuNkulunkulu. Ngangikholwa ngisho nokuthi uma ngangingaqambi amanga, ngangingeke ngikwazi ukuqhubeka ngisebenza kuleli zwe. Kamuva, ngabona lawa mazwi avela kuNkulunkulu: “Bephila kulo mhlaba, bephila ngaphansi kwethonya lokukhohlakala kukaSathane, akunakwenzeka ukuba abantu bathembeke, kodwa singakwazi, lapho sesethembekile, ukuphila kulo mphakathi nakulo mhlaba? Singahlukaniswa yikho? Cha—siyophila njengaphambili, ngoba asethembeli enkohlisweni ukuze sidle ukudla, noma siphefumule umoya. Kunalokho, sethembela emphefumulweni nasekuphileni okunikezwe nguNkulunkulu ukuze siphile; ukuthi nje, namuhla, izimiso zokuphila kwethu, lapho kuqonde khona kanye nezinhloso zokuphila kwethu, nesisekelo sokuphila kwethu kufanele konke kuguquke. Ukuthi nje siguqula indlela yethu yokuphila ukuze sanelise uNkulunkulu futhi sifune insindiso, futhi lokhu akuhlobene nhlobo nokudla, ukugqoka, nendawo yokuhlala inyama. Lokhu kuyisidingo sethu somoya. Akunjalo?” (“Ukuze Wethembeke, Kufanele Uvuleke Kwabanye” kwethi Izinkulumo ZikaKristu Ezilotshiwe). Amazwi kaNkulunkulu aphinda futhi aqinisa ukuzethemba kwami emzamweni wami wokuba umuntu oqotho, futhi aqeda ukukhathazeka kwami. Akunandaba ukuthi bakubona kanjani ukukholwa kwami kuNkulunkulu, ngizimisele ukwenza okusemandleni ami ukuze ngibe umuntu oqotho ngokuvumelana nezimfuneko zikaNkulunkulu, ukuba ngingaphili ngamanga njengasesikhathini esedlule. Ngemva kwalokho, angibange ngisabagwema, kodwa ngaxoxa nabo ngendlela evamile. Lapho ngibona ukuthi babhekene nobunzima, ngangibasiza ngokusemandleni ami. Lapho ngixoxa nabo esikhathini esedlule njalo ngangibukisisa ukusabela kwabo, ngesaba ukuthi ngizocasula othile ngokusho okuthile futhi ngilimaze engikuthandayo noma ngithonye indlela abangibheka ngayo. Manje ngenza lokhu ngokuvumelana nezimfuneko zikaNkulunkulu futhi angisalindele ukuthola noma yimiphi imihlomulo kubo. Kunalokho, ngisebenzelana nabo ngothando nangokuvumelana neqiniso. Noma yiziphi izinto ezingafanele abazishoyo noma abazenzayo, angilokothi ngibagxeke ngazo, ngisebenzisa iqiniso ukulungisa imibono yabo eyiphutha. Ngemva kwesikhathi esithile, ngabona ukuthi lezo zihlobo nabangane ababezigcina bekude nami ngenxa yokuthi ngangikholwa kuNkulunkulu zazifuna ukuxoxa nami, futhi bonke babekholwa ukuthi ngangisesikhundleni esiphakeme kunabo. Lapho bebhekana nobunzima babekujabulela ukukhuluma nami, futhi ngakwazi ukushumayela ivangeli likaNkulunkulu wezinsuku zokugcina kubo. Ngokuhlangenwe nakho kwami ngaqonda ngokujulile ukuthi amazwi kaNkulunkulu uSomandla ngempela ayiqiniso, indlela, nokuphila. Umsebenzi wokuhlambulula nokuguqula abantu awenzayo ezinsukwini zokugcina ungokoqobo ngempela, futhi nakuba ngaphandle ubonakala sengathi awunyakazisi umhlaba, usenze saqaphela ngempela indlela yokuphila, indlela yokuba ngabantu, futhi uphethe ngokuthi usiguqule, wasenza kancane kancane salahla isimo sokukhohlakala kukaSathane futhi saphila njengabantu, saphila ngenkululeko, ngokujabula, nangokukhululeka. Esikhathini esedlule, ngangingaxhumanisi umsebenzi kaNkulunkulu wokusindisa isintu nokuphila kwami okungokoqobo. Kodwa manje, ngokuhlangenwe nakho kwami, ngizwa ngokujulile ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu wokwahlulela nokuhlambulula ezinsukwini zokugcina uyilokho bonke abantu abonakele abakudingayo. Uma kuphela abantu benza lolu hlobo lomsebenzi futhi bemukela insindiso kaNkulunkulu bangaphila njengabantu futhi babe nokuphila okujabulisayo nokwethembisayo.
Ngibonga ukwahlulela nokusola kukaNkulunkulu, okungivumela ukuba ekugcineni ngikhululeke ezibophweni zamandla obumnyama, ukuze ngingazifihli ngenxa yokulawulwa idumela nesikhundla, futhi nginganyathela emhlabathini oqinile endlini kaNkulunkulu bese ngifeza umsebenzi wami njengesidalwa. Ekuhambeni le ndlela, ngibone ngempela ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu wokwahlulela nokusola ezinsukwini zokugcina ngowokusindisa ngempela isintu. Nakuba ngihlangabezane nokuhlupheka phakathi kokwahlulela nokusola Kwakhe, enhliziyweni yami ngijabula kakhulu, futhi ngizwa ukuthi ngiyakwazi ukwamukela ukwahlulela nokusola Kwakhe futhi ngiphile impilo yokuba umuntu. Lokhu kuyinhlanhla yami, futhi kuphinde kube yinduduzo enkulu kimi. Nakuba ngisasilela kakhulu ezimfunekweni zokuba umuntu oqotho, ngizoqhubeka nokusebenza kanzima ukuze ngibe umuntu oqotho ngempela ozokwenza uNkulunkulu ajabule!
Ukuhlupheka Kwakhuthaza Uthando Lwami LukaNkulunkulu Ukuqonda Ngokusindiswa Ukubaluleka Kokusebenzisana Emsebenzini Umoya Wokuqhosha Ngaphambi Kokuwa
Izwi Livela Lisenyameni Ukuqhutshwa kwesithi Izwi Livela Lisenyameni Amazwi kaKristu Wezinsuku Zokugcina (Okukhethiwe) Ukuvulwa Komqulu YiWundlu Ukwahlulela Kuqala Endlini KaNkulunkulu Izinkulumo ZikaKristu Ezilotshiwe Amazwi kaNkulunkulu Avelele ngeVangeli Lombuso (Okukhethwayo) Izimvu ZikaNkulunkulu Zizwa Izwi LikaNkulunkulu (Okubalulekile Kwamakholwa Amasha) Landela iWundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha Ofakazi BakaKristu Wezinsuku Zokugcina Imibuzo Eyikhulu Nezimpendulo Ukuhlola Indlela Yeqiniso Ubufakazi Babanqobi Ubufakazi Ngokubhekana Nokwahlulela kukaKristu Indlela Engibuyele Ngayo KuNkulunkulu USomandla